HOMAMIADAN’NY NONO SY VOZON’NY TRANON-JAZA : Natao fitiliana ireo mpiasan’ny kaominina
Nifarana ny andron’ny 13 oktobra 2020 tamin’ny 5 ora hariva ny fitiliana maimaim-poana ny homamiadan’ny nono sy ny vozon’ny tranon-jaza tao amin’ny lapan’ny tanàna. 16 octobre 2020
Naharitra 2 andro ny nanaovana azy io ary natokana ho an’ny mpiasan’ny kaominina vehivavy sy ny vehivavy vadin’ny mpiasan’ny kaominina.
Amin’ny anaran’ny Ben’ny tanàna mpisolo toerana Ravelomanantsoa Emilson, no ankasitrahan’ireo mpahazo tombontsoa feno ny fondation Akbaraly sy ny Hopitaly Candide, izay tsy nikely soroka tamin’ny fanatontosana izany hetsika sosialy ara-pahasalamana izany. Tafiditra ao anatin’ny fanamarihana ny "octobre Rose" moa izao hetsika izao.
Tsy mifarana fa mbola misy ny fitiliana hataon’izy ireo ho an’ny mpiasa eny anivon’ny CHU PZAGA amin’ny 16 oktobra 2020 ary ho an’ny daholobe kosa eny amin’ny CSBII Tsararano Ambony, ny 30 oktobra 2020. Hetsika efa fanaon’ny fondation Akbaraly sy ny hopitaly Candide isan-taona izy ity ary sokafana ho an’ny daholobe.
Nahazo tombony kosa ny mpiasan’ny kaominina sy ny Hopitaly PZaGa tamin’ity taona ity. Ho an’izay tsy mahatratra ireo fotoana ireo kosa dia misy isanandro eny amin’ny hopitaly Candide ny fitiliana ny homamiadan’ny vozon’ny tranon-jaza sy ny nono.